कांग्रेसमा आरोपप्रत्यारोप, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा - Jhilko
नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशन आउन झण्डै एक वर्षको समय बाँकी नै रहेका बेला चुनाव लक्षित आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइराला परिवारका सदस्यबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको हो । अबको नेतृत्वका लागि सुरु भएको आरोप प्रत्यारोपमा सभापति देउवा र कोइराला परिवारका सदस्यबीचको दूरी झनै बढिरहेको छ । तर, पौडेल भने बिरालोले मुसा कुरेजस्तै शान्त रूपमा नेतृत्वको आशा गरेर बसेका छन् । उनी यसपटक पार्टी नेतृत्वका लागि अन्तिम कसरतमा कस्सिएका छन् । दुबै समूहमध्ये कुनै एकमा नलागेसम्म सभापति हुन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले पौडेल जोखाना हेरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमा मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा सभापति देउवा नै देखिएका छन् । शक्ति सङ्घर्षका हिसाबले हेर्दा बलियो शक्तिको रूपमा उनी छन् । आगामी महाधिवेशनमा पनि आफू नै सभापति बन्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने देउवाको योजना छ । उनलाई टक्कर दिनका लागि कोइराला परिवारबाट वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नेतृत्व लिने गरी योजना बनाउन थालेका छन् ।
कोइराला परिवारका शशांक मात्र होइन, सुजाता कोइराला र डा. शेखर कोइराला पनि नेतृत्वको होडमा छन् । आगामी १४ औँ महाधिवेशनका लागि कांग्रेसमा कोइराला परिवारलाई एक ठाउँमा देखाउनका लागि केही वर्ष अघिदेखि नै एकै ठाउँ खाना खाने, छलफल गर्ने र कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विकल्प खोज्नाले पार्टी कमजोर भएको दर्शाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
कांग्रेसमा देउवा र कोइराला परिवारबाहेकको शक्तिका रूपमा रामचन्द्र पौडेल अगाडि सरेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वका लागि अन्तिम कसरत सुरु गरेका छन् । नेतृत्व पाउने शर्तमा जुनसुकै क्याम्प परिवर्तन गर्ने तयारी पौडेलको छ । पौडेल पक्षधर नेताहरू पनि गुटगत समूहमा विभाजित रहेकाले सजिलो भने पक्कै हुने छैन ।
कोइराला परिवार वा देउवाको आशीर्वादले मात्र आफू सभापति बन्ने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका छन् । आफू निकटका नेता प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतको साथले मात्र आफूलाई पुग्ने छैन भन्ने पौडेलले राम्रोसँग बुझेका छन् । १३ औँ महाधिवेशनको तेस्रो धारका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनाउनु पनि उनका लागि चुनौती छ ।
देउवा र कोइराला परिवारबीचको आरोप–प्रत्यारोप
देउवा सभापति बनेपछि कोइराला परिवारले एकपछि अर्को गर्दै देउवामाथि प्रहार थालेको थियो । पार्टीको विधान विपरीतका गतिविधि गरेको, कोइराला परिवारलाई बेवास्ता गरेको, चुनावमा पार्टीको पराजयमा मुख्य दोषी रहेको लगायतका आरोप देउवालाई निरन्तर लागिरहेको छ । नेतृत्वमाथि प्रहार थालेपछि कोइराला परिवारका तीन सदस्यबीच नाटकीय रूपमा एकताको सन्देश प्रवाह भएको थियो । त्यसलगत्तै देउवाविरुद्ध कोइराला परिवारले निरन्तर आरोप लगाइरहेको छ । देउवालाई आरोपमात्र लगाएको होइन, कोइराला परिवारले कांग्रेसमा आफ्नो परिवारको विरासतको खोजी गरिरहेको छ ।
कोइराला परिवारको आरोप सुनिरहेका सभापति देउवाले प्रतिवाद सुरु गरेका छन् । भर्खरैमात्र कांग्रेस कोइराला परिवारको बपौती नभएको बताएका थिए । देउवाले थर कोइराला छ भन्दैमा कांग्रेस पार्टीको सभापति बन्न पाउनैपर्छ भनेर भन्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाए । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको कोइराला परिवारका सदस्यले पार्टी र देशका लागि केही पनि काम नगरेको आरोप लगाउँदै अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत देउवाले दिएका थिए । शेखर, शशांक र सुजाताले वीरगञ्जमै देउवाको आलोचना गरेपछि त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
कोइराला परिवारले भने पछिल्लो आरोप–प्रत्यारोपमा १४ औँ महाधिवेशन सार्ने देउवाले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउन थालेको छ । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले १४ औँ महाधिवेशन सार्ने षड्यन्त्र देउवाले गरेको आरोप लगाएका छन् । देउवाले विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेकाले पार्टी कमजोर भएको उनको आरोप छ । कोइराला परिवारले महाधिवेशनमा यही विषयलाई एजेण्डा बनाउने सङ्केत दिएको छ । महाधिवेशनको तयारीस्वरूप डा. शेखरले मात्रै ७० जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर कोइराला परिवारमा समेत विरासत कसले धान्ने भन्नेमा विवाद छ ।
कोइराला परिवारमै समस्या
सुशील कोइरालाको निधनपछि कोइराला परिवारको विरासतको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ । कृष्णप्रसाद कोइरालाका तीनै भाइ छोरा– मातृका, विश्वेश्वर र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । नेपाली कांग्रेसको स्थापनादेखि नै एक दुई कार्यकालबाहेक सबै नेतृत्व कोइराला परिवारबाट भएको छ ।
विसं २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र ०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दै वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । ०४७ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पटकपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।
एउटै परिवार नभए पनि कृष्णप्रसादका साढुभाइका छोरा सुशील कोइराला पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बने । यसरी पनि कोइराला परिवारको शक्ति र स्थायित्व कांग्रेसमा रहेको पुष्टि हुन्छ । कोइराला परिवारबाट सुजाता, शंशाक र शेखर अहिले सक्रिय राजनीतिमा छन् । सुजाता, शेखर र शशांकमध्येबाट एक जना सभापति र अन्यले पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने लगभग पक्काजस्तै छ । कोइराला परिवारलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अब कहिल्यै नफर्किने गरी परिवारबाट बाहिर काँग्रेस जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले १४औँ महाधिवेशनमा कोइराला परिवार एकै ठाउँमा उभिने निश्चित छ । शेरबहादुर, शुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसादलगायत बाहेक नेपाली काँग्रेसमा अहिलेसम्म कोइराला परिवारबाहिर नेतृत्व पुगेको छैन ।
काँग्रेसमा कोइराला परिवार
सन् १९४६ अक्टोबर २ मा वीपी कोइरालाको आह्वानमा भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने द सर्चलाइट पत्रिकामार्फत् भारतमा रहेका नेपालीलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीहरूको अखिल भारतीय सङ्गठन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो । विसं. २००३ कार्तिक १५ गते वीपी कोइरालाको सक्रियतामा बनारसमा बस्ने नेपालीहरू सङ्गठित भए । देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक संस्थाको स्थापना भयो । त्यही वर्षको माघमा भएको प्रथम महाधिवेशनले यसको नाम नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस राखेको थियो । महाधिवेशनले वीपी कोइरालालाई कार्यकारी सभापति र नेपालको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापति चयन ग¥यो । त्यही वर्षको फागुन २० गते विराटनगरमा पहिलोपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मजदुर आन्दोलन भयो ।
विसं. २००४ सालमा सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अधिबेशन काशीमा भयो । त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट ग¥यो । रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाएलगत्तै २००५ देखि नै कोइराला परिवार र अरूबीचको झैझगडा सुरु भएको मानिन्छ । त्यसैको फलस्वरूप २००५ साउनमा कोलकातामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस स्थापना भयो । त्यतिबेला मातृका गुट नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसमा विलय भयो । २००६ साल चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कोइराला समूहबीच पार्टी एकता भयो । चैत २७ मा कोलकातामा भएको सम्मेलनले पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखेको थियो । नेपाली कांग्रेस गठनलगत्तै पार्टीमा कोइराला परिवारको हाबी बढ्न थाल्यो । छिटफुटबाहेक सबैजसो नेतृत्व कोइराला परिवारमा र शक्तिशाली सङ्घर्षको नेतृत्व पनि कोइराला परिवारले लिएको छ । खासगरी सशस्त्र सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण तथा निर्णायक आन्दोलन यी सबैमा कोइराला परिवारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि २०२९ साल भदौ ९ गते वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष भएको थियो । त्यसो त ३० सालको आसपासमा कोइरालाबाट नेतृत्व अरुले लिने प्रयास समेत भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै गणेशमान सिंहसँग कोइराला परिवार निकै डराउँथ्यो । गणेशमानलाई पार्टी नेतृत्वमा आउन नदिनका लागि त्यतिबेला वीपी उपचारका लागि अमेरिका जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति घोषणा गरिएको थियो । उपचारार्थ गएका वीपी फर्किएपछि फेरि उनैले कांग्रेसलाई हाँके । त्यतिबेला नै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।
सत्ता नेतृत्व पनि कोइराला परिवारले नै लिएको छ । २००८ सालमा नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार समेत गठन भयो । सरकार गठनसँगै मातृकाप्रसाद कोइराला र वीपी कोइरालाबीचको विवादले उग्र रूप लिएपछि फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशन स्थगित भयो । पछि २००९ मा वीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति भए । विवाद बढेपछि २०१० सालमा मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरेका थिए । २०१२ सालमा सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापतिमा छानिए । त्यस्तै १७ सालमा फेरि वीपी सभापति बने भने ०३४ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति बने । ०३९ सालमा विपीको निधन भयो । ०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि पार्टी सभापति बने भने त्यसलगत्तै विपीका भाइ गिरिजाप्रसादले पार्टीको लगातार नेतृत्व गरे । गिरिजाप्रसादको २०६६ साल चैत ७ मा निधन भएपछि फेरि सुशील कोइरालाले कांग्रेसको नेतृत्व गरे । १२औँ महाधिवेशनले सुशीललाई नै कांग्रेसको सभापति चयन ग¥यो । १३ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिने तयारी गरेका सुशीलको अप्रत्याशित निधनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकोमा पुग्यो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
उच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आज रिट दिवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सो...
प्रदेश सभाको बैठकले संसोधन गरी प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको...